Opinions & Discussion » ရေသာများပီး ငါးမရှိ No fish in the big pond.	12
တောင်ပေါ်သား says: ဒီတစ်ခါတော့ တော်သား ဟ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
Alinsett@Maung Thura says: ပျံလာခဲ့ပါ သုထမီကြောင် …
naywoon ni says: ​ရေထဲ ငါးမယှိ​ဒေါ့လည်း ​ရေသန့်​ဒါ​ပေါ့ဂျာ ။ ​တော်​ကျာ ငါး​ဒွေကခြီးပါချရင်​ ​ယေ​ဒေညစ်​ပပ်​ ကုံမှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1112
Ko chogyi says: အတွေးအခေါ်ရော ပေါ်လစီပါ စွယ်စုံရတဲ့
အူးစည် says: အလုပ်မချိ ကြောင်ရေချိုးနေသည့် ဘခင်ညွှန့် လက်ထက်ကြွင်းကျန်
Wow says: ကျနော်ဆိုရင်တော့ ထမိန် အဲလေ စကတ်စွန်တောင်ဆွဲပီး cat cat လန် ရန်တွေ့ပစ်မာ…
ဘွားဒေါ်ကတော့ ဘာလို့အိလိုလုပ်သလဲ ဥာဏ်မမှီ… အန်းနီးဝေး သူကလွဲပီး သောက်ကောင်းပြော ထောက်ခံရမဲ့သူလဲ မတွေ့သေးတာမို့ သူ့ထမိန်စပဲ ဆွဲလိုက်ပါမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အော ကြောင်ကြောင်
worship လုပ်သင့် လို့ ကို တမင် လုပ် နေတာ။ ငှဲငှဲငှဲငှဲငှဲငှဲငှဲ (ငါကွ) ခွက်ဒစ် – ကြောင်စုတ်
You lift us up on wings like eagles (နားထောင်ကြည့် ၊ နားထောင် လို့ ကောင်း တယ်၊ စု ကို မြင်ပြီး နားထောင် ကြည့် ကြောင်ကြောင်။ အစ်မ စကား နားထောင်နော်) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: အရီးလတ်နောက်ကပဲ သူ့ထမီစဆွဲပြီးလိုက်ပါတယ်။
(ခွက်ဒစ်တူ ဘမ်ဘူး) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: သများ ဆို ထမိန် အခိုင် ဝူး။ lol:-))))))))
Mike says: .ဒီသတင်းမှန်တယ်ဆို ကျုပ်လည်း အံ့သြတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: ရေများပြီးငါးမရှိတာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .သြော် ကကြောင်ရယ်။ Manyasaint has had to succumb to the devil’s pact of political compromise. လို့ ဖြေပေးရင် ရမလား။